Prometheus In The New Age: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က “လွတ်လပ်ရေးဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်အတွင်းတွင် အဆိုသွင်းရုံနှင့်မရ” တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က “လွတ်လပ်ရေးဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်အတွင်းတွင် အဆိုသွင်းရုံနှင့်မရ” တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က “လွတ်လပ်ရေးဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်အတွင်းတွင် အဆိုသွင်းရုံနှင့်မရ”တဲ့
သခင်အောင်ဆန်း ရေးသော “ကမ္ဘာစစ်နှင့်ဗမာ” ဆောင်းပါးမှ
ယင်းဆောင်းပါးကို ဘုံဝါဒနှင့် တို့ဗမာ၊ ရန်ကုန်၊ ပြည်သူ့ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Independence cannot be won by mere passing of resolutions in the Legislative Assembly, which is merely an exercise in publicity. Not by showmanship, vote buying or office seeking but by incessant struggle and sacrifice, can we achieve victory.
From ‘World War and Burma’ by General Aung San
Created by Blogger Demowaiyen၊ Blogger Alinsek၊ Blogger Kamikaze
၂၇. အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၀
Posted by အလင်းဆက် at 11:23 PM